माछाखोला डिपोमा चामल सकियो - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १२ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:०७
धार्चेको माछाखोला डिपोमा चामल सकिएको छ । खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोरखा स्थित कार्यालयबाट सहुलियत दरको चामल पठाउन नसकेपछि खाद्यान्न अभाव स्थानीयले बताएका छन् ।
२०७७/७८ मा कम्पनीले माछाखोला डिपोमा पाँच सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपथ्र्यो । वर्षातका कारण बाटो अवरुद्ध भएको भन्दै पाँच सय क्विन्टल ढुवानी हुनुपर्नेमा तिन सय ६१ क्विन्टल मात्रै ढुवानी भएको थियो । कोटा अनुसार ढुवानी नहुँदा माछाखोलामा खाद्यान्न अभाव भएको हो ।
लगातार वर्षातका कारण अहिले ढुवानी गर्न समस्या भएको कम्पनीले जनाएको छ । सिर्दिवास स्थित डिपोमा भने हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी भएकाले अझैपनि दुई सय ७४ क्विन्टल चामल मोजाद रहेको कार्यालय प्रमुख नविन बस्नेतले बताए । सिर्दिबास डिपोमा तीन हजार पाँच सय क्विन्टल ढुवानी गर्नुपर्ने कोटा निर्धारण भएको थियो । त्यो मध्ये दुइ हजार आठ सय ५७ क्विन्टल मात्रै ढुवानी भएको थियो । एक सय ५० क्विलन्टल भने खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने भन्दै हेलिकप्टरबाट केही समय अघि ढुवानी गरिएको हो ।
कम्पनीले गोरखा स्थित कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्त सम्म कोभिडको समयमा छुट विक्रि अन्र्तगत चार सय ९२ क्विलन्टल चामल बिक्री गरेको प्रमुख बस्नेतले बताए । संस्थाले छ प्रकारका चामल २० प्रतिशत छुटमा विक्रि गरेको थियो ।
सर्वसाधारणहरुले पनि कोरोना प्रभावका बेला सस्ंथानबाट उपलब्ध उक्त चामल खरिद गरेका थिए । सदरमुकाम स्थित डिपोबाट छुटको चामल धेरै बिक्री भएको थियो । कम्पनी सँग अहिले जम्मा एक हजार २० क्विनटल चामल मौजाद छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पनि खाद्यान्न ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
साउन २० गते सम्म बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद रहेको कार्यालयले जनाएको छ । उत्तरी दुर्गम भेगमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने तर दररेट कम भएको भन्दै ब्यवशायीले ढुवानीमा प्रतिप्रर्धा गर्दैनन् । गत वर्ष पनि एक पटकमा ठेक्का नलागेपछि पुन ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।
चालु वर्ष सिर्दिबास डिपोका लागि तीन हजार पाँच सय क्लिवन्टल, माछाखोलाका लागि पाँच सय र गोरखा स्थित डिपोका लागि पाँच हजार पाँच सय क्लिवन्टल चामल ढुवानीको लागि टेण्डर आह्वान भएको छ ।
घुँडाभन्दा तल उनको दुबै खुट्टा छैनन् तर पनि साहासिक काममध्ये मानिने हिमाल आरोहणमा उनी लागिपरेका
गाईखुरको ऐतिहासिक मुन्नाघर
शिव उप्रेती : मुन्ना घर तामाको पाताले छाउने तयारी थियो । त्यसका लागि गोदामभरि तामाका